Goobta - ITS Tech School
Ku saabsan Delhi
New Delhi, oo ah caasimad caasimadda India, waa magaalo weyn oo ku taal waqooyiga dalka. Delhi waa isku-dheelitirnaan wanaagsan ee dhaqanka sanadka ee 1600 iyo magaalada tiknoolajiyadeed ee horumarsan. Delhi waxay muujinaysaa Taariikhda Taariikhda Mughal Era, oo ay ku jiraan Red Fort, Humayun's Tomb iyo Qutub Minar. Delhi waxay ku qoran tahay '50 Meelaha Lifetime' Magazine National Geographic Traveler. Markaad timaado Delhi waxaad sidoo kale fursad u helaysaa inaad sahamiso WA MAHAL (Wonders of the World) maadaama ay ku dhowdahay magaalada Delhi waxaana la siiyaa sidii safar dhamaystiran oo lagu siiyay ITS.
Solutions Technologies Innovative waxay leedahay xafiis madaxeedGurgaon. ITS waxay ugu horreyn ku leedahay tababaro IT, qolal tababar iyo shirkad bixiye xal.ITS Tech Schoolbixiyaaqolka tababarka ee gurgaonoo loogu talagalay tababaro ganacsi leh jawi waxbarasho oo qani ah oo leh qaab-dhismeedkayaga casriga ah iyo tas-hiilaadyada dhammaadka sare sida baahiyaha tababarka shirkadaha farsamada.
ITS wuxuu haystaa badanaaqolalka tababarka ee Gurgaonie at South City 1, Star Mall iyo Sector - 14 oo leh meel u dhow Xarunta Huda ee Magaalada, Iffco Chowk iyo MG Roads Metro. ITS wuxuu leeyahay 13qolal tababar oo loogu talagalay kirada Gurigawaxayna kaqeyb qaadan kartaa ka qaybgalayaasha 270 hal maalin. ITSXarunta Tababarka Gurigawaxay ku qalabaysan yihiin mishiinada sare, koronto dhejiska iyo guddiga cad.
Ka soo jiid jimicsiga fasaladaaga ee aagga qabow-ka-baxa ah ee dhammaan ardayda oo dhan wada seexdaan. Tijaabi noocyada kala duwan ee Hindiya iyo Afrikaanka ah si aad u siiso daaweyn si aad uhesho.
Dhamaan fursadaha degaankeena ee Gurgaon waxay leeyihiin qolal hawo leh oo aad u fiican oo leh hiwaayad casri ah. Wi-Fi, Tv, kuleyliyaha, nuqul awood leh, dhakhtarku wuxuu kuugu baaqayaa joogitaankaaga si siman.
Halkaas waxaa ku yaal dhismo yididiilo ah oo yurub ah, Hotel Pllazio wuxuu ku yaal barkadda dabbaasha, isboortiga iyo fayadhowrka iyo fayoqabka.
700 oo ka socota Xarunta Saldhiga Dhexe ee Huda iyo Isbitaalka Fortis
Diiqada Bar cabitaan ka dib cuntadaada
Gym & Barkadda Dabaasha
Cuntada makhaayadda Cunnada aduunka ee Melange.
Ku soo dhawoow hab cusub oo ka wanaagsan oo aad ku safri kartid safar ganacsi, meesha aad si fiican u xiran tahay iyo nasashada nasashada habeenkii.
Cunto & Cunto cusub
Jikada Kursiga ee Joogga ah
Xarunta Fayadhowrka iyo Fayoqabka ee goobta
IHG Abaalmarinta Kooxda
B 100 A, Koonfurta magaalada 1, Taariiqda Saxeexa Meesha,
Isniin-Jim 9: 00-18: 00